तपाईंको साँचो दर्शक को हो? | Martech Zone
सोमबार, अप्रिल 5, 2010 शनिबार, जून १,, २०१। Douglas Karr
जब तपाइँ तपाइँको सामग्री लेख्दै हुनुहुन्छ वा सोशल मिडिया मार्फत कुराकानीमा सामेल हुनुहुन्छ, के तपाइँ सजग हुनुहुन्छ कि कसले पढिरहेको छ, अवलोकन गर्दैछ र सूचना लिइरहेको छ? कर्पोरेट ब्लगहरू र व्यक्तित्वहरू जुन मैले सोशल मिडियामा देख्छु पारदर्शी छन्, तर सायद अलि अगाडि नै।
यो ध्यानमा राख्नु महत्वपूर्ण छ कि प्राथमिक दर्शक तपाईका सम्पूर्ण दर्शक अनलाइन छैनन्। तपाईको प्राथमिक दर्शकहरु तपाईसँग कुराकानी गर्न र तपाईसँग दैनिक आधारमा कुराकानी गर्न सक्छन् - तर तिनीहरू अल्पसंख्यक हुन्। तपाईंको माध्यमिक, अदृश्य दर्शकहरू वास्तवमा बहुमत हो। तिनीहरू चुपचाप पढिरहेका छन्, नोटहरू लिदैछन् र अगाडि बढ्ने हो कि नगर्ने भनेर निर्णय गरिरहेका छन्।
तपाईंको दर्शक हुन सक्छ
अर्को कम्पनी वा उद्यमीले तपाईंलाई भाँडामा पुर्‍याउँछ कि गर्दैन भनेर मूल्या .्कन गर्दै।
उद्योग पेशेवरहरूले तपाइँ नेता हुनुहुन्छ कि हुँदैन निर्धारण गर्छन्।
सम्मेलन नेताहरूले तपाईंलाई बोल्ने सगाईको सम्भावनाको लागि मापन गर्छन्।
हुनसक्छ तपाईको सामग्री पुस्तक सामग्री हुन सक्छ कि भनेर एक पुस्तक प्रकाशक निर्धारण गर्दै।
तपाईका मालिक र सहकर्मीहरू।
तपाईका साथी र परिवार
तपाइँको उत्पादनहरू र सेवाहरूमा रुचि राख्ने एक जिज्ञासु दर्शक।
एक परिप्रेक्ष्य कर्मचारी वा व्यापार साझेदार।
सन्देश के हो जुन तपाईं यी प्रत्येक दर्शकहरूलाई संवाद गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाईंसँग प्रत्येक प्रकारका दर्शकहरूसँग संलग्न हुनको लागि मार्ग छ? के तपाईं आफूलाई केही दर्शकबाट टाढा राख्दै हुनुहुन्छ? म एक लिंक्डइन थ्रेडमा केहि हप्ता अघि भएको थियो जब मध्यस्थकर्ताले एक जना सदस्यलाई सार्वजनिक रूपमा बेटिल बनायो। मलाई थाहा थियो तब म थाइन कहिल्यै मध्यस्थको साथ व्यापार गर्न चाहानुहुन्छ। उसले सायद यो महसुस पनि गर्दैन।
तपाईको वातावरण, तपाईको प्रतिष्ठा र तपाईको श्रोताको बारेमा सचेत हुनुहोस्। तपाईं अनजानमै तपाईंको अर्को नेतृत्व बन्द गर्दै वा तपाईंको अर्को व्यापारको अवसरलाई नष्ट गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईंले संलग्न गर्नुभएको प्राथमिक दर्शकहरू साँचो दर्शकहरू होइनन्, केवल तिनीहरू मात्र हुन् जसले तपाईंलाई आफू त्यहाँ रहेको बताउन दिन्छन्। यो ती व्यक्तिहरू हुन् जसलाई तपाईले सचेत हुनुपर्दैन।
टैग: दर्शकप्रतिष्ठासामाजिक मिडिया दर्शकहरु